Version 0.3.3 – 9 New fiteny
Septambra 6, 2009 amin'ny tolotra 12 Comments
Tianay ny hisaotra Google ho fanampiana ny fanohanany 9 fiteny vaovao: Afrikaans, Belarosiana, Islandey, Irlandey, Masedoniana, Malay, Swahili, Welsh sy Yiddish. Efa nanampy fanohanana ny WordPress plugin izay nitondra kely raha noho ny olana mitsikera manaraka. Inona no tokony hampiasa saina ny Yiddish? Zavatra voalohany dia te hilaza dia ny sainam-pirenena dia miovaova, manaraka fotsiny ny FAQ, ary raha tsy tianao ny safidintsika, tsy misy manery anao.
Taorian'ny adihevitra fohy dia nanapa-kevitra izahay ny hanome Yiddish Vondrona Eoropeana ny sainam-pirenena noho ny antony roa, iray – ny teny niandohan'ny teo, tsy misy firenena manokana sy faharoa – ny sainam-pirenena dia tsy hijoro ho misy firenena manokana toy izany koa ny teny izay tsy afaka mifandray amin'ny firenena rehetra. Raha misy manana soso-kevitra tsara kokoa, misokatra isika mihaino ireo izy.
Izany ihany koa ny famoahana manaraka herinandro vitsivitsy ny fahanginana, izay isika no mieritreritra amim-pahanginana sy mifanakalo hevitra momba endri-javatra vaovao, izay Manantena Ho afaka hamoaka tsy ho ela, misy fanampiana sy akony tsy ho ankasitrahana ihany koa fa hanampy antsika hanolotra vokatra tsara kokoa.
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: saina sprites, dikanteny google, tsy ampy taona, fiteny maro, fanafahana, WordPress plugin
Jolay 19, 2009 amin'ny tolotra Leave a Comment
Ny dikan vaovao manampy fanandramana fanohanana ny CSS sprites. Zavatra tsy Mampihena ny pejy entana fotoana (raha azo atao) ary manatsara ny Google ny pejy haingana sy ny Yslow Yahoo maro. Misy ihany koa ny hametraka ny fehezan-dalàna indray-farany izay mamela sprites mba ho noforonina mba hifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny iray (raha enina saina ihany fa tsy 40, Nahoana no mampiasa 12k sary?). Tsy mbola misy – fa azontsika omena ny marina antontan-taratasy ho any izay mila azy ireo, Miresaha fotsiny isika, na hevitra mikasika ity lahatsoratra ity. Tianay ihany koa ny misaotra indrindra Marek Fišer ho Mpanampy amin'ny CSS izay namela anay ho manala ny tsy misy ilàna azy ny ankehitriny blank.gif, tsy ao amin'ny antontan-taratasy CSS, fa koa ao amin'ny fandikan-teny interface tsara.
Vitsivitsy bibikely no raikitra ao amin'io dikan-, miainga tsy hampiasa livewriter ny olana amin'ny niverina tany teny tany am-boalohany ao amin'ny Widget, ny fiovana vatan-kazo no namanao eto.
Fangatahana hafa – Fitaovana ny Trac (trac.transposh.org) mba hametraka Bibikely, izany dia manampy antsika (ary ianao) mahazo valiny tsara kokoa sy ampy amin'ny bibikely fandrosoana, ary koa ny mamela antsika mba tsy mitovy asa.
Manantena izahay fa hahazo izany ianao fanafahana.
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: CSS sprites, saina sprites, tsy ampy taona, fanafahana, WordPress plugin
CSS sprites avy
Jolay 9, 2009 amin'ny tolotra 3 Comments
Ny manaraka dika, izay ho avy amin'ny faran'ny herinandro manaraka dia ahitana fanohanana ny CSS sprites ho ny saina Widget. Izany no tombony amin'ny resaka hafainganam-pandeha sy ny maro ny fangatahana natao tamin'ny aterineto mpizara. Ny fehezan-dalàna dia efa miasa eo amin'ny toerana ity ary tianay mankasitraka fa aoka isika mahalala ny misy olana no tojo eo amin'ny lafiny mpanjifa (tsy fitsipika navigateur – IE6, sns).
Na iza na iza izay te-hitondra ny fehezan-dalàna ho kofehy ireny, dia mihoatra noho ny nandray mba hifandray antsika mba hahazo fanafahana amin'ny fiainana talohan'ny fehezan-dalàna.
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: CSS sprites, saina sprites